काठमाडौं (बाराबाट फर्केपछि) – बारा र पर्सामा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण स्थानीय स्तरमा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ ।
सरकारी, सामुदायिक र निजी पहलमा उद्धार, राहत वितरण र विपद् व्यवस्थापनका काम भइरहेका छन्, तर छोटो क्षणको आँधीहुरी कति शक्तिशाली थियो ? कसरी उत्पन्न भयो ? यी प्रश्नको वैज्ञानिक जवाफ कुनै निकायबाट आएको छैन ।
स्थानीय स्तरमा भएको क्षति र सर्वसाधारणको भोगाइका आधारमा आँधीबारे अनुमान भने गर्न सकिन्छ । बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिका– ४ खुटुवाबाट लोकान्तर डटकमका सम्पादक विमल गौतमको भिडियो रिपोर्ट :-
चैत २१, २०७५ मा प्रकाशित
पहिलोपटक अन्डरपासको यात्रा, धूलोले निस्सासिए चालक !